XOG: Askarta kasoo baxsaneysa dalka Eritrea oo sii kordhaya iyo Xog laga ururiyey saraakiil iyo ciidamo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Askarta kasoo baxsaneysa dalka Eritrea oo sii kordhaya iyo Xog laga ururiyey saraakiil iyo ciidamo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Askarta kasoo baxsaneysa dalka Eritrea oo sii kordhaya iyo Xog laga ururiyey saraakiil iyo ciidamo
Xaaladda askarta Soomaalida ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa weli mugdi ku jiraa, iyadoo aanay weli faahfaahin ka bixin maaxda dowladda Federaalka.
Waxaa sii kordhaya dhalinyarrada kasoo baxsanaya dalka Eritrea ee ka mid ahayd ciidamada dalkaasi la geeyay, waxayna ka hadleen xaqiiqada xaaladda ay ku sugnaayeen iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dalkaasi oo dayac, ku shaqeysasho iyo xaalado adag ku sugnaayeen.
Xogaha laga soo ururiyey dhalinyarrada kasoo baxsatay xeryaha Etirea iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ka warramay xaalado nolol xumo iyo shaqooyin adag lagu shaqeyso iyo qaar ka mida oo ku dhintay xaalado kala duwan oo dagaal ka mid yahay, sida iska hor imaad dhex maray tababarayaasii Eritrean-ka iyo askarta Soomaalida oo dhacay Septembar sanadkii hore 2020.
Barnaamijka Galka Baarista ee VOA-da ayaa lagu wareystay askar dhowaan kasoo baxsatay dalkaas oo qaarkood soo gaaray Soomaaliya, waxayna wararku sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso in dhallinyaradaas dib loo soo celiyo.
Ciidamada la geeyay Eritrea
Previous articleGuddoomiyaha Baarlamanka Galmudug oo magacaabay Guddiga Qabanqaabada Doorashada Aqalka Sare
Next articleSheekh Shariif oo War kasoo saaray inay u tanaasuleen Musharixiin uu ka mid yahay Xasan Sheekh